I-Bressert Auto Trading Technology - I-Bot - Iinkqubo zokuThengisa ngeZithuthi - Izikhombisi-Iikholeji zokuThengisa
Iinkqubo zokuThengisa ngokuZenzekelayo - Izikhombisi-iiNkundla zoRhwebo
Okungakumbi Ngomsebenzi weBusinessert Trading Technology Jonga kakhulu
I-CycleTrader Auto Trading Systems
I-Bressert Auto Trading Technology
Jerome Bressert - i PowerCLOSE
Walter Bressert’s – 12 Cardinal Mistake ku Trading elizayo
Walter Bressert’s – UkuThengiswa noLawulo
Joyina isiteshi sethu YouTube kwaye ujonge elininzi iividiyo yorhwebo luncedo nyanga nganye
Funda Ukwazisa Ingozi ngaphambi kokuba uthenge okanye uqeshise nayiphi na imveliso kule website.
I-imeyile yethu ngqo
Igama eliphelele *
Umbuzo? / I ngxelo? / Demo? *
I-Copyright 2016. I-Bressert Trading Technology - Wonke amalungelo agcinwe
Iziphumo zentsebenzo ye-Hypothetical zinezinto ezininzi ezithintekayo, ezinye zazo zichazwe ngezantsi. Akukho sakhiwo esenziwayo Ukuba nayiphi i-akhawunti iya kuba okanye ifumaneke inzuzo okanye iyalahlekelwa efanayo naleyo eboniswayo; Enyanisweni, kukho ulwahlulo olubukhali rhoqo phakathi kweempembelelo zokusebenza kunye neziphumo ezona zifezekiswe yiphina inkqubo yokurhweba. Enye yeeMilinganiselo zempembelelo yokusebenza ngokukodwa kukuba kukuba zilungiswe ngokubanzi ngenzuzo yokujonga. Ukongezelela, ukuhweba kwe-Hypothetical hakubandakanyi umngcipheko wezezimali, kwaye akukho xwebhu lokuthengisa lwangokuthi luyakwazi ukuphendula ngokuthe ngqo ngempembelelo yomngcipheko wezoqoqosho. Umzekelo, ukukwazi ukuMelana nokulahlekelwa okanye ukunamathela kwiprogram ethile yokurhweba Ngaphandle kwezinto zokuthengisa ezilahlekileyo zizinto eziphathekayo ezinokuthi zichaphazele kakubi iziphumo zorhwebo. Kukho ezinye izinto ezininzi ezinxulumene neemarike ngokubanzi okanye ekuphunyezweni kwanoma yiphina inkqubo efanelekileyo yokurhweba engenakulinganiswa ngokugcwele kwiCandelo lokulungiselela iziphumo zokusebenza kunye nazo zonke ezinokuthi zichaphazele kakubi iziphumo zokurhweba. Umngcipheko kwaye akusiyo wonke umtyalomali. Umtyalo-mali unako ukulahlekelwa yiyo yonke into okanye ngaphezulu kokutsalwa kotyalo. Umngcipheko mngcipheko yimali engahle ilahleke ngaphandle kokuphazamisa ukhuseleko lwezezimali okanye indlela yokuphila. Umngcipheko kuphela kufuneka usetyenziswe ukurhweba kwaye kuphela abo abanomngcipheko onobungozi obuninzi kufuneka baqwalasele ukurhweba. Ukusebenza kwangaphambili akubonakali ukuba kukho iziphumo ezizayo. Ukwazisa: utyalo-mali kwiziqinisekiso kunye nezinto ezibandakanya ubungozi kwaye akufanele kwenziwe ngaphandle kokuqonda yonke ingozi ephathelene nokuthengiswa kunye nokuthengwa kweziqinisekiso. I-cycletrader, isofthiwe ye-profittrader echazwe apha yenzelwe isixhobo sokuncedisa abatyali-mali kwizigqibo zotyalo-mali. Unembopheleleko yodwa yokuvavanya nokugqiba ukuba yeyiphi na imimiselo yokubandakanyeka kuyo nayiphi na intsebenziswano, kunye nokuchonga ukufaneleka kokhetho lwakho. Ngokutyalomali kwii-securities okanye iimpahla, unokulahlekelwa yimali yakho yonke. Ukusebenza kwangaphambili akuqinisekisi iziphumo ezizayo. Naliphi na inkqubo yokurhweba kule ndawo ayikwazi ukukunika imali kwaye kufuneka uyiqonde ingozi ebandakanywe apha ngasentla.